ထူးထူးခြားခြား ပင့်ကူများ – AnZarTone
တိရစ္ဆာန်တွေထဲမှာတော့ ပုံအပျက်ဆုံး ပင့်ကူလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သူ့တစ်ကိုယ်လုံးကို အရည်စက်တွေ၊ ကြွက်နို့ပုံစံတွေနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ပုံစံဟာ ကြည့်လိုက်ရင် ငှက်ချီးနဲ့ တူနေပါတယ်။ ပင့်ကူတစ်ကောင်လို့ ထင်စရာတောင် မရှိပါဘူး။ ဒီပင့်ကူတွေက တစ်ခါတစ်ရံမှာ အဖြူရောင် ပိုးမျည်တွေကို ထုတ်လုပ်ပြီး အဲ့ဒီ အဖြူရောင် ပိုးမျည်ပေါ်မှာ နေထိုင်လေ့ ရှိပါတယ်။ အဖြူရောင်ပေါ်မှာ မည်းမည်းလေးဆိုတော့ ငှက်တွေ သစ်ရွက်ပေါ်ကို ပါသွားတဲ့ ချီးတုံးလေးနဲ့ ပိုတူသွားပါတယ်။ ဒီလို ပင့်ကူမျိုးတွေကို အာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ အင်ဒိုနီရှားကနေ ဂျပန်အထိ တွေ့ရလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တုတ်ချောင်းနဲ့တူတဲ့ ပင့်ကူဆိုတာက ကျနော် ပေးထားတဲ့ နာမည်ပါ။ ကြည့်ပါလား။ ပင့်ကူက ပင့်ကူလိုမှ မဟုတ်ဘဲနဲ့။ ဒီပင့်ကူတွေကိုတော့ Australia နိုင်ငံမှာ တွေ့ရလေ့ ရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ပိန်ရှည်ရှည်ကြီး ဖြစ်နေပြီး မြွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ တူတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီပင့်ကူမျိုးတွေကို Colubrinus လို့ အမည်ပေးထားကြပါတယ်။ Colubrinus ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က “Snake-Like” ကို ဆိုလိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကင်းမြီးကောက် အမြီးနဲ့ ပင့်ကူ
ဒီနာမည် ဘာကြောင့် ပေးထားရသလဲဆိုတော့ ပင့်ကူအမတွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဝမ်းဗိုက်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပင့်ကူအမ ဆိုတော့ အထီး မဟုတ်လို့ပေါ့။ ဟုတ်ကဲ့ .. အထီးတွေမှာ အဲ့ဒီလို ပုံစံမျိုး မပါပါဘူး။ ပင့်ကူအထီးတွေရဲ့ ပုံစံဟာ သာမန်ပုံစံမျိုး ဖြစ်ပြီး သေးငယ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဒီလို ပင့်ကူမျိုးတွေကို Australia နိုင်ငံမှာ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ မယုံရင် သွားကြည့်ကြပါ။
ပုံမှာ တွေ့တော်မူကြတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ မျက်လုံးက ပြူးကြောင်ကြောင်ရှိသမို့။ ပြူးကြောင်ကြောင် ပင့်ကူဟူ၍ အမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီပင့်ကူတွေဟာ ခုန်ပျံကျော်လွှား ပင့်ကူအမျိုးအစား ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့ဟာ အသားစား ပင့်ကူမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲ အသီးအရွက်စား ပင့်ကူမျိုးတွေလို့ ဆိုပါတယ်။ သူတိုရဲ့ ခုန်ပျံခြင်း စွမ်းအင်ကို သူတို့ကို ရန်မူလာတဲ့ ပုရွတ်ဆိတ်တွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာ အသုံးချကြတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ဒီပင့်ကူမျိုးတွေကို Madagascar နဲ့ အာဖရိက၊ သြစတြေးလျ ရဲ့ အချို့သော နေရာတွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လည်ပင်းတွေဟာ ရှည်လျားလွန်းတဲ့အတွက် မေးရိုးကြီးတယ်လို့ ထင်ရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီပင့်ကူတွေက အခြားပင့်ကူတွေကို ဖမ်းဆီး စားသောက်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မျိုးဖျက်တဲ့ ပင့်ကူလို့ သူတို့ကို အမည်ပေးထားကြပါတယ်။
ဒီပင့်ကူမျိုးတွေကိုတော့ ရေနေပင့်ကူတွေအဖြစ် လူသိများကြပါတယ်။ သူတို့ကို ဥရောပနဲ့ အာရှတစ်ခွင်မှာ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ UK ကနေ Siberia အထိ တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့ဟာ ရေကန်ငယ်လေးတွေ၊ ရေစီးနှေးတဲ့ စမ်းချောင်းတွေထဲမှာ နေထိုင်လေ့ရှိကြပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့။ ဒါဟာ အမှန်တကယ် ပင့်ကူတစ်ကောင်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို ဟာဝိုင်ရီရဲ့ RainForest တွေထဲမှာ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အဝါရောင် ကိုယ်ထည်ဟာ ထူးခြားလှပြီး တစ်ခါတစ်လေမှာ ပြုံးနေတဲ့ မျက်နှာရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်နဲ့ တူနေတတ်ပါတယ်။
အထက်ပါ ထူးခြားတဲ့ ပင့်ကူတွေကို ဒီနေရာ (http://listverse.com/) ကနေ ယူပြီး တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံ ဖတ်ချင်သူများ မူရင်းလင့်ကို သွားကြည့်ကြပါ။ ကျနော်ကတော့ တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ကိုယ်နားလည်မိသလောက်ကို ဘာသာပြန်ပြီး ကျော်၍တစ်ဖုံ ခွ၍တစ်နည်း အနည်းအပါး ဗဟုသုတ ရစေခြင်းအကျိုးငှာလည်းကောင်း၊ မသိသေးသူများ သိစေခြင်း အကျိုးငှာလည်းကောင်း တင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ဝမ်းသာ၊ လန်းဖြာကြစေကုန် ………..
This entry was posted in Blog and tagged ထူးထူးခြားခြား ပင့်ကူများ. Bookmark the permalink.
WordPress အား အသုံးပြုထားသည့် နိုင်ငံတကာသတင်းစာများ →